बाउआमा नि’काल्ने डा’क्टरबारे बहिनीको ड’रला’ग्दो खुलाशा, ब’न्दुक बोकेर हि’डछ दाइ भन्दै ग’र्जीइन, छतबाट फा’लेको कुरा सत्य कि झुट ? हेर्नुस (भिडियो) – Tufan Media News
बाउआमा नि’काल्ने डा’क्टरबारे बहिनीको ड’रला’ग्दो खुलाशा, ब’न्दुक बोकेर हि’डछ दाइ भन्दै ग’र्जीइन, छतबाट फा’लेको कुरा सत्य कि झुट ? हेर्नुस (भिडियो)
३ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:१२
काठमाडौं| हरि कुमार श्रेष्ठ र कमला देबी श्रेष्ठकी छोरा प्रेम राज श्रेष्ठ अहिले डाक्टर छन । उनलाई धेरै दु:ख गरेर डाक्टर पढाए तर यति धेरै पढाएको उपलब्धि बुवा आमाले माया पाउनुको सट्टा घृ’णा सहनु परेको छ ।
आफ्नै छोराबाट ति’रस्कृत हुनु परेको छ । छोराको माया ममता पाउने समयमा उनले आफ्नो बाबा आमालाई घर छो’ड्न समेत भनेका छन । उनि डाक्टर पेशा गरिरहेको मान्छेले बचतको त के कुरा उनको आफ्नो बहिनीले बिदेशमा १० बर्ष पसिना बगाएर किनेको घर समेत उनले हडपेर सबैलाई घर छोड्न आदेश दिएको उनको बहिनि बताउछिन ।
उनको बहिनी सरला भन्छिन मलाई अपाच्य शब्द दाइले बोलेको उनि बताउछिन । उनि आफुले दुख गरेर किनेको घरमा आफै बस्न नपाउने हुदा र बारम्बार मानसिक टचर दिने हुदा उनि मिडियामा आउन बाध्य भएको उनि बताउछिन ।
हेर्नुस यसै घ:टनाको आजको फलोअप रिपोर्टमा हेर्नुस –